Qof looga shakisnaa dilka Kim Jong-nam oo “layaabay” in durba la sii daayay | Hangool News
Qof looga shakisnaa dilka Kim Jong-nam oo “layaabay” in durba la sii daayay
Haweenay dalka Indonesia u dhalatay oo la sii daayay iyadoo ku eedaysnayd in ay dishay wiil ay walaalo yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay “in ay layaab ku noqotay” markay ogaatay in la sii daynayo.
Waraysi ay siisay BBC ayay ku sheegtay in ay mar ku fikirtay “arrintani ma noloshaada dhammaadkeedii baa”
“Marnaba isma oran marxalad intaas la eg ayaa madaxa laguu galin” ayay tiri Aisyah oo la hadashay laanta Indonesian-ka ee BBC, maalin ka dib markii la sii daayay.
“Markii u horraysay qaadan waa bay igu noqotay, waana rumaysan waayay,” ayay tiri markii la sii daayay, waxayse intaas ku dartay in ay faraxsan tahay.”
“Mararka qaarkood toddobaadkii halmar ayaan qolalka ka soo bixi jirnay oon ku dhex lugayn jirnay xabsiga gudahiisa. Waan kulanay waxaana waydiiyay sideed tahay? Salaam kali ah unbayna iga ahayd.”
Image caption Doan Thi Huong (bidix) iyo Siti Aisyah ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay shirqooshay
Ra’iisulwasaaraga Malaysia Mahathir Mohamad ayaa sheegay in go’aanka lagu fasaxay gabadhan uu waafaqsan yahay sharciga dalka”.
Waxaa jira sharci ogol in lala laaban karo dacwadaha qof loo haysto. Arrintaas ayaana dhacday. Ma garanayo faahfaahinta sababta arrintaasi ku dhacday,” ayuu ku yiri saxafiyiinta.
Raggaas ayaa wali la la’yahay in kastoo booliiska adduunka ee Interpol uu soo saaray waraaqdii lagu xiri lahaa.